Appelbaum decides to home in on Burma.. ဒန်တန်ဒန့်… | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Community & Society » Appelbaum decides to home in on Burma.. ဒန်တန်ဒန့်…
Appelbaum decides to home in on Burma.. ဒန်တန်ဒန့်…
Posted by kai on Dec 3, 2010 in Community & Society, Myanma News, News | 13 comments
အမေရိကန် ဟက်ကာတယောက်ပေါ့လေ..။ မြန်မာပြည်ထဲ လည်လည်လာသွားတဲ့အကြောင်းသတင်းလေးပါ..။ ဘိုးတော်လိုပဲ.. စိတ်ကလေးညွှတ်ပြီးလည်လည်သွားလိုက်တာပေါ့..။ ခန္ဓာကိုယ်ကတော့ ယူအက်စ်က သူ့အိမ်မှာပဲ ကျန်နေခဲ့ပါတယ်..။ ဆိုတော့ .. ဘိုးတော်လို့ ခေါ်ရမလားပါပဲ..။
လွန်ခဲ့တဲ့ အနှစ် ၁၀၀ လောက်ကသာ ရှေ့ ဖြစ်ကြည့်နိုင်တဲ့သူတယောက်ယောက်က အခုခေတ်က .. သူ့ကိုလှမ်းအာရုံပြုမြင်မိရင် .. ဘိုးတော်၊ ဇော်ဂျီလို့ အမည်တပ်လိုက်မှာအသေအချာပါ..။
သူက ၀ိကီလိခ့်ရဲ့ တဦးတည်းသော အမေရိကန် အဖွဲ့ ဝင်ပါတဲ့..။ ဓါတ်ပုံက သူ့ပုံပါ..။ အောက်မှာ သတင်းထဲကနေ ကောက်နှုတ်ထားတဲ့စာတွေကို ဖတ်ကြည့်ပြီး .. မြန်မာပြည်ထဲက .. လျှို့ဝှက်လှပါပြီ ထင်နေသူများကိုယ်စား … ရယ်(ရီ)ပေးကြပေ့ါနော..။ ဒန်တန်ဒန့် လို့..။
American hacker Jacob Appelbaum fights repressive regimes around the world. Now he’s on the run from his own government
Dec 01, 2010 6:34 PM EST
Learn more about Tor ..
သိပ်တော် လွန်းရင် မေးပေးပါ..
*ဂူဂဲဖွင့်ရင် တရုတ် ဂူဂဲ ဖြစ်ဖြစ်နေတယ်။ နောက်ဆက်တွဲ ဘာ ဖြစ်နိုင်လဲ *
တဦးချင်းအနေနဲ့ ဘာမှမဖြစ်လောက်ပါဘူး..။ တရုတ်က သူ့နိုင်ငံထဲကနေ မြန်မာအင်တာနက်ကို ဖြတ်ထွက်ဖို့ Routing လုပ်ခိုင်းတော့ … ဂိုဂယ်က ..အလိုအလျှောက်ပဲ ..တရုတ်အိုင်ပီ..တရုတ်ဂူဂယ် ပြနေတာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်..။
နိုင်ငံအနေနဲ့ကတော့ … ပြည်တွင်းကလူတွေဘာလုပ်တယ်..ဘယ်သွားကြည့်တယ်..။ မြန်မာအာဏာပိုင်တွေရဲ့ သံရုံးတွေပို့ တဲ့စာတွေ..အကုန်တရုတ်က ဖြတ်ဖောက်ကြည့်လို့ရနိုင်တာပေါ့..။
မထူးဘူးမဟုတ်လား.. နကိုကတည်းက .. မြန်မာပြည်ကို တရုတ်က သူတို့ပြည်နယ်တခုသိတ်မှတ်ထားတာပဲဟာ…နော..။
ဧည့်စာရင်းတိုင်ဖို့ တလုပ်စာ သင်ရတော့မဲ့ ခေတ် တကယ်ရောက်တော့ မလားဘဲနော်။ တလုပ်တွေက ဒီမှာ ပျော်မှာ.. သားသမီး အကန့် အသတ်မရှိ ယူလို့ရတယ်။ စီးပွားရေး ဈေးကွက်ကလည်းကောင်း… ;(
တရုတ် google က ဆင်ဆာကျွေးထားပြီးသား … ပြည်သူလူထုတွေ မကြည့်သင့်တာ မမြင်သင့်တာ မဖတ်သင့်တာ တွေကို စေတနာ သုံးတန် ပြဌာန်းပြီး ဖွင့်လို့မရအောင် လုပ်ထားပေးတယ် … ပြည်သူတွေ အထိတ်တလန့်မဖြစ်အောင် စာရိတ္တမပျက်ပြားအောင် ရည်ရွယ်ပါတယ် …
တရုတ်ကြီး ရီသံ ….
သူတို့က တက်နိုလိုဂျီပိုင်း သိပ်တော်နေရင် ကျုပ်တို့ကလည်း ဝိဇ္ဇာနည်းနဲ့ ပြန်ချရမပေါ့။ ဥုံဖွ ချီးတုံးမတ်တတ်ထ…
awww မြန်မာပြည်က လျို့ ဝှက်အရှုပ်တော်ပုံတွေကို သိသွားပီပေါ့
ဦးကြောင်ကြီး စာလုံးပေါင်း မမှားစေနဲ့.. အီးတုံး မတ်တတ်ထ ဆိုရင်.. ဟီးဟီး.. နှမတော် အီးတုံးလေး မတ်တပ် ထရပ်နေရမယ်။
နောက်ဆိုရင် မြန်မာပြည်က – ” တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော် ” လို့ ပြောင်းရတော့မှာ
ကြည့်ရတာ… မြန်မာပြည်က အရင်တုံးကထွက်ဖူးတဲ့.. မြောက်ကိုရီးယားခရီးသွားမှတ်တမ်းတွေ။ တရုတ်ပြည်ခရီးမှတ်တမ်းတွေ..အခုဦးခင်ညွှန့် ဗီဒီယိုဖိုင်တွေ ..ဒီလူထုတ်နေတာဖြစ်မယ်..။
၀ိကီလိခ်ရဲ့ .. တားဂက်က ..အစိုးရတွေဆိုတော့လေ…။
သူ့တို့ဆီကပို့ကုန်တွေထဲမှာ မြန်မာလျော့ပါးရေး စီမံချက် ရှိတယ်နဲ့တူတယ်
ခဏခဏ တိုက်ပြီးလူတွေ လျော့လျော့ကုန်တယ်
မတိုက်ဖူးဆိုတဲ့ နေ့လည်းမရှိဘူး တရုတ်ဆိုင်ကယ်တွေနဲ့ သေခြင်းတရားဟာ ကြမ်းတယ် ဖြစ်နေပြီ
နဂိုက ပလပ်စတစ်နဲ့ သိမ်းနေတာ ခု ပိုဆိုးနေသလိုပဲနော် ကျန်တဲ့နေရာပြောရဲပါဘူး ကိုယ့်ရွာထဲမို့ ကိုယ်ပြောတာ
ဘာမှ လာမပြောနဲ့.. ကွန်ပြူတာ ခုံမှာ ထိုင်နေတာ.. ဘယ်သူ ဘာ ပြောပြော မထ ဘူး.. ဖယ်မခိုင်းနဲ့.. မဖယ်ဘူးကွ.. မဖယ်ဘူး…
အင်တာနက် သုံးတာ ကို ပြောတာနော်..